Reese Witherspoon sy Salma Hayek ary ny zanany vavy dia nanjary kintana lehibe indrindra tamin'ny horonantsarin'ilay sarimihetsika "Time Fracture"
Omaly tany Los Angeles, ny premieran'ny sarimihetsika izay ahitana tantara mahafinaritra antsoina hoe "Time Fracture". Ny anjara asan'ny anton'ity kasety ity dia nanamarika toy ireny mpilalao sarimihetsika toa an'i Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Salma Hayek, Chris Pine ary maro hafa. Tany am-piandohan'ny sarimihetsika, maro ireo kintan'ny sarimihetsika no tonga niaraka tamin'ny zanany ary tsy mahagaga izany, satria, araka ny lazain'ny mpanatrika, "Ny fracture of time" dia maodely maoderina ho an'ny zatovo.
Ny fanariana ny sarimihetsika "The Broken of Time"
Ny mpitsidika ny zava-nitranga tao amin'ny photocall teo anoloan'ny premiere
Talohan'ny nanombohan'ny sarimihetsika mampiseho ny "The Time Beat" dia nisy photocall iray natao, izay nametrahana ny kintana. Ny voalohany teo amin'ny lalamby manga dia ny mpilalao sarimihetsika Reese Witherspoon, niaraka tamin'ny zanany vavy Ava. Amin'ny kintanin'ny sarimihetsika 41 taona, afaka mahita akanjo lava lavalava vita amin'ny burgundy misy lurex ianao. Ny endrika dia tsy mahazatra: navangongo endrika iray miaraka amin'ny soroka misokatra ary nipitrapatraka ny elatry ny hem. Raha ho an'i Ava, ny akanjo ankafizin'ilay tovovavy dia laconic: akanjo lava mainty sy marefo amin'ny lohalika kely.
Reese Witherspoon sy Ava zanany vavy
Taorian'ireo mpanao gazety dia niseho ny mpilalao sarimihetsika Laura Dern sy ny zanany vavy Jaya. Amin'ny kintanin'ny sarimihetsika 51 taona, afaka mahita akanjo lava mainty ianao, izay voaravaka eo anoloana amin'ny kofehy, ary akanjo mafana amin'ny printy leopard. Ho an'i Jay, ilay tovovavy tao amin'ny "Breaking Time" dia niseho tao anaty totohondry mainty sy jaky tao am-pony. Taorian'izany dia nandao ilay karipetra manga ny bevohoka Eva Longoria. Tao amin'ilay mpilalao sarimihetsika, afaka nahita akanjo maitso maitso ianao, ankoatra izay dia nanao akanjo lava mainty lava midi.
Laura Dern miaraka amin'ny zanany vavy Jaya
Ny olona manaraka izay niseho teo anoloan'ny mpaka sary dia ilay mpilalao sarimihetsika Salma Hayek. Ny vehivavy dia afaka mahita akanjo hoditra mainty miaraka amin'ny fehikibo maromaro misy stratezina, mitovy loko mitovy amin'ny karavasy sy jaky. Oprah Winfrey dia niseho tao amin'ny kitapo manga taorian'ny Salma. Ny mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra dia nampiseho ny endriny mampiavaka azy, nanao akanjo manga miaraka amina lohalika lalina sy tsanganana mahaliana avy amin'ny harato eo amin'ny sorony sy ny tendany. Nanao akanjo manga ihany koa i Chris Pine. Ao amin'ilay mpilalao sarimihetsika tanora dia afaka mahita môtô manga iray ianao, marika manga mainty ary mitovy loko mitovy.
Tena mampidi-doza: Ashley Graham mametraka akanjo lava vita amin'ny lava-bolo
Reese Witherspoon no mpitoraka bilaogy
Salma Hayek nanohana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana Meksikana handrara ny fivarotana ireo saribakoly Frida Kahlo
"The Broken of Time" - tantara mahagaga momba an'i Meg Murry
Ny sarimihetsika "Time Fracture" dia mitantara ny tantaran'ilay zazavavy antsoina hoe Meg Murry. Ny teti-dratsy dia manala ny mpijery amin'ny dia mahagaga izay mitranga amin'ny tontolo mistery sy hafahafa. Voalaza fa ny mpitsikera sarimihetsika dia nanome ny sanda ho an'ny avo lenta. Raha ny hevitr'ireo mpijery kely dia faly tamin'ny zavatra hitany izy ireo.
Afisy ho an'ny horonantsary "The Broken of Time"
Angelina Jolie sy Brad Pitt dia nanandrana nanamafy ny fanambadiana tamin'ny tatoazy mystika
Ekstasy avy amin'ny sakafo: Bella Hadid dia tsy mandà ny sakafo mahatsiravina
Reese Witherspoon niaro ny vady taloha Ryan Phillip
Modely Leyla Leys nanambara ny fisian'ny dravina avy amin'i Drake
Ben Affleck sy Jennifer Garner
Double # 2: Nasehon'i Nicky Minage ny peratra fanoherana
Miverina kely ambany mandritra ny fitondrana vohoka
38 amin'ireo loharano mahafinaritra indrindra eran'izao tontolo izao
Akanjo fotsy-ririnina 2014-2015
Sakafo Gabardine - famaritana
Furunculosis - Antony sy fitsaboana
Scottish cat contingent
Fahasalamana - famantarana ny fampiasana
Ny akanjon'ny vehivavy miaraka amin'ny zipo
Taylor Swift dia nandà $ 3 tapitrisa ho an'ny lanonana fanaovana batemy
Tafio-bato eo amin'ny lakandrano miaraka amin'ny kiraro
Ahoana no tokony hialana amin'ny toerana akaiky?
Kobeja - fipetrahana ary miala
Fandrobana ny rantsantanana